सुर्य खड्का, रविन लामिछाने र सुनिता बुढाको नया सहकार्य 'कलशैमा पानी' रातारात भाईरल (भिडियोसहित) - SudurSanchar
नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा एकपछी अर्को गर्दै निकै उत्कृष्ट गीत संगीत बजारमा आइरहेका छन् । सोहि क्रममा उत्कृष्ट शब्द सिर्जना गर्ने सर्जकको रुपमा चिनिएका गायक तथा सर्जक रविन लामिछानको शब्द तथा लय सिर्जना रहेको नयाँ गीत कलशैमा पानी भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको छ ।
गरिवीका कारण बैदेशिनु पर्ने नेपालीहरुको कथालाई लिएर रविनले निकै दमदार शब्द सिर्जना गरेका छन भने सुर्य खड्का र सुनिता बुढाको गीतमा आवाज रहेको छ । यसो त पचास लाख भन्दा धेरै नेपालीहरु विदेशमा रहेका छन । यस गीतका गायक समेत रोजगारीको शिलशिलामा जापानमा छन । यस्तै लाखौं नेपालीको पिडालाई गीतले देखाउन खोजेको छ ।
गीतको म्युजिक भिडियोले गीतका शब्द र आवाजलाई समेत न्याय गरेको छ । चर्चित युवा निर्देशक विनोद भण्डारीले गीतको कलात्मक निर्देशन मात्र गरेका छैनन् दमदार अभिनय समेत गरेका छन । उनलाई अभिनयमा जुना गुरुङले साथ दिएकी छन ।
माया मारेर पछि समिक्षा अधिकारी र नरेश खातीले १ बर्ष पछि फेरी ल्याए नया गीत’हाम फालम कि'(भिडियो)
बर्षौंपछि लोकप्रिय गायक कुलेन्द्र बिश्वकर्मा र मोडल रन्जिता गुरुङ एकै गीतमा, यस्तो बन्यो भिडियो
हेर्नुस् ! मृगौला यसरी फेरेर फर्किएकी छिन् चम्सुरी मेरी बास्सैमा,छायांकनमा पुग्दा सबैजना भा’वुक भए (भिडियो हेर्नुस्)
आहा ! बिनिता र सचिनको पहिलो भेट बल्ल भयो,यसरी गीत गाएर यति धेरै रमाइलो गरे (भिडियो हेर्नुस्)